Imbwa yekutanga kuyedza kuti ndeye coronavirus kuUnited States yafa - Tamban RELAY
Imbwa yekutanga kuongororwa kuti ndeye coronavirus muUnited States yafa
Imbwa yekutanga kuongororwa kuti inoona coronavirus muUnited States afa, inodaro magazini yeNational Geographic, mushure mekusangana nezviratidzo zvinoita senge zvakafanana nezvevanhu vazhinji.
Buddy, Mufudzi weGerman wemakore manomwe, akarwara munaKubvumbi, panguva imwecheteyo muridzi wake Robert Mahoney paari pora kubva kuCovid-19, magazini yakataura svondo rino. Akaita kunge aine mhino yakatsvinda uye kunetseka kufema, uye chimiro chake chakaramba chichiwedzera mumavhiki.
Robert Mahoney nemukadzi wake Allison, vanogara kuNew York City, pakupedzisira vakafunga kumanikidza imbwa yacho musi waChikunguru 11 apo Buddy akatanga kurutsa zvimedu zveropa, ropa mumhino yake uye kutadza kufamba.
Mhuri iyi yakaudza National Geographic kuti vanofungidzira kuti ane chirwere ichi asi zvakange zvakaomarara kuratidza. "Pasina mumvuri wekusahadzika, ndakafunga (Buddy) akanaka", akadaro Robert Mahoney. Asi kwete chete kuti vanoverengeka vets munzvimbo yake yakavharwa nekuda kwedenda, vamwe vaizvibvunzawo nezve mukana wekuti mhuka inogona kubata Covid-19.
Kliniki pakupedzisira yakakwanisa kuratidza kuti Buddy aive akatapukirwa zvechokwadi, uye kuti imwe mhuka mumhuri, mwana wemwedzi gumi-giredhi uyo asina kumbobvira arwara, aive nehutachiona hwehutachiona.
Vanachiremba vakabata Buddy vakazoona kuti imbwa yacho yaive zvakare ichirwara ne lymphoma, izvo zvinogona kuratidza kuti, sevanhu, mhuka dzine nhoroondo yekurapa dzinogona kunge dzichirwara zvakanyanya kubva kutsva coronavirus.
Pamutemo, maererano neWorld Health Organisation, mhuka dzinovaraidza hadziwanzo kuendesa hutachiona kuvaridzi vadzo. Imbwa gumi nembiri nekitsi gumi dzakayedza hutachiona hweCoronavirus muUnited States, maererano neNational Geographic.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://onvoitout.com/le-premier-chien-teste-positif-au-coronavirus-aux-etats-unis-est-mort/
Zimbabwe: $ 3,5 bhiriyoni yakabhadharwa kuvarungu vachena semubhadharo wepasi
Sekureva kwa Kanye West, Michael Jackson, R. Kelly naBill Cosby "vakadzikiswa" ...